Tilmaamo Ka Saaraya urka Dhidid Dharka | Ragga Stylish
Waxaa ugu wanaagsan in isla markaaba wax laga qabto oo si dhakhso leh loo daweeyo dharka urta dhidid. Sidan oo kale, urka dhididka ayaa laga tirtiri karaa si wax ku ool ah isla markaana isla markaa ka hortaga wasakh jaalle ah sii joog dharkaaga si joogto ah.
Haddii aad aragto in dharkaagu uraya sida dhididka xitaa ka dib markii ay ahaayeen dhaq, waxaad isticmaali kartaa daawo guriga wax ku ool ah. Kuwa badan waxaa ka mid ah bicarbonate soodhaha biyo lagu qaso. Jinka waxaa lagu sameeyaa labada walxood waxaana lagu dhajiyaa dharka aagga kilkilaha, waxaana loo daayaa inuu ku dhaqmo habeenkii.
Haddii aad doorbideyso, halkii aad ka dalban lahayd soodhaha sida ku cad tillaabadii hore, waxaad ku dari kartaa koob yar oo ah bicarbonate saabuunta caadiga ah ee dharka lagu dhaqo. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhexdhexaad ka noqoto oo aad baabi'iso urka dhididka ee dharkaaga.
Xal kale oo lagu baabi'inayo urka dhidid dharka waa in la isticmaalo astaamaha khalka. Waxay kudareysaa oo khal Blanco uumi bixiye ku qas qadar biyo ah oo isku mid ah. Kadib, ku faaf isku dar ah meelaha udugga xun oo u daa in ku dhow 10 daqiiqo. Kadib dharka waa la dhaqaa.
Waxaa intaa dheer in khal, liin Waa qayb kale oo dabiici ah oo wax ku ool ah si looga saaro urta dhididka dharka. Waxaad sidoo kale isku dari kartaa casiirka a liin isla qaddar biyo ah, iyadoo gacan ka heleysa maro ama isbuunyo, iskudarkana u mari meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Sidoo kale waa lagu talinayaa in la dhigo ropa isla markiiba ka dib maydhashada si looga fogaado ur ur ah. Waa loo oggol yahay inuu ku qallalo hawada furan waana inaan la isticmaalin qalajiyaha haddii urta aan laga saarin, maadaama kuleylka uu sii xoojinayo ur.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Tilmaamaha looga saarayo urka dhididka dharka